Ababhalisi abaSimahla beYouTube | Ukuthandwa simahla kweYouTube
Thenga isivumelwano sePakeji
Thenga isizobo seYouTube
Abalandeli be-Instagram abasimahla
Thenga IGTV Ukuthanda
Thenga iAustralia Reels Views
Bhalisa / Ngenisa
Ababhalisi beYouTube simahla kunye nokuThanda simahla kwi-YouTube
Nyusa ukuKhula kwesiteshi sakho seYouTube namhlanje!
Inethiwekhi yethu elula ikuvumela ukuba ufumane ababhalisile kwi-YouTube kunye nezinto ozithandayo kwisitishi sakho. Ukhetho oluhlawulelweyo oluhle lokukhula okungenamandla luyafumaneka.
Fumana ababhalisi beYouTube mahala or Thenga abathengi be-YouTube
Landela la manyathelo alula kwaye ukonyuse ukukhula kwesiteshi sakho seYouTube ngemizuzu!
Inyathelo 1. Ukungena kunye nokuNgena
Inyathelo 2. Sebenzisa isiCwangciso
Inyathelo 3. Nyusa ijelo lakho
Iimpawu eziphambili kunye neziBonelelo
Ukuba awukhathali ukuthatha imizuzu embalwa yonke imihla ukwenza isicwangciso, sinikezela ngeendlela ezintle ezinokufikelela kubabhalisi abali-10 basimahla kunye nokuthandwa simahla kweYouTube ngosuku.
I-YouTubers njengawe usebenzisa le nkonzo yokutshintsha ukuze ufumane ababhalisile ngapha nangapha phakathi kwezinye i-YouTube.
Ikhuselekile, ikhuselekile, ikhuselekile
Inkonzo yeSoNuker ikhuselekile kwaye ikhuselekile! Iitshaneli zeYouTube azifumani sohlwayo ngokusebenzisa inkonzo yethu kwaye sisebenza ngemfihlo, ukhuseleko kunye nemfihlo engqongqo.
Ukuba ukhetha ukungazami kwaye ngokuzenzekelayo ufumane ababhalisi be-YouTube kunye nokuthandwa kwevidiyo yonke imihla, ke sincoma isicwangciso esihlawulelweyo sokufumana umzamo we-zero, ukukhula kwemihla ngemihla!
Inethiwekhi yethu yenzelwe ukuba isisiseko kwaye ilula kuye wonke umntu ukuba ayisebenzise. Bhalisa iakhawunti, ungene kwaye okunye kuyazichaza!
Iqela lethu lenkxaso elinobuhlobo lilapha ukunceda! Ngaba unombuzo, uluvo okanye inkxalabo? Siyi-imeyile elula kwaye siphendula kuyo yonke imibuzo ngaphakathi kweeyure ezingama-24-72.
Ndifuna ababhalisi basimahla kunye nokuthandwa ngoku!
Kutheni usebenzisa iSoNuker?
I-SoNuker ibonelela ngenethiwekhi enobuchule ekuvumela ukuba ufumane ngokukhawuleza kwaye ngokulula 10 Ababhalisi beYouTube simahla kwaye I-10 yasimahla yokuthandwa ngu-YouTube qho kwiiyure ezili-12! Izicwangciso ezihlawulelweyo ziyafumaneka, kodwa izicwangciso zasimahla zisasebenza kakhulu ekukhuliseni ijelo lakho. Awudingi ukungena kwiakhawunti yakho ye-YouTube ukufikelela kwiwebhusayithi yethu, ukugcina ulwazi lwakho lwesiteshi seYouTube lukhuselekile kwaye lukhuselekile.
I-SoNuker yenzelwe ukuba ibe lula njengokulula komntu! Ixesha lakho libalulekile kwaye siyayiqonda lonto. Ukufumana ababhalisi be-YouTube simahla kunye nezinto abazithandayo, uthanda nje kwaye ubhalisele ezinye iindlela ezingama-20. Uya kufumana ababhalisile ngaphakathi kweeyure ezili-12 kwaye unokuphinda le nkqubo rhoqo emva kweeyure ezili-12 zokukhula okuqhubekayo.
Ungabona iziphumo kwangoko!
Xa uvula isicwangciso sasimahla okanye esihlawulelweyo, uya kubona ababhalisile bakho beqala ukwanda kwangoko. Ngokusebenzisa ngokwakho isicwangciso sasimahla rhoqo kwiiyure ezili-12, okanye wenze isicwangciso esihlawulelwayo esizenzekelayo esiyi-100%. Sebenzisa isicwangciso esihlawulelweyo kwaye ufumane ngokuzenzekelayo ababhalisile yonke imihla!
Izicwangciso zokuKhula kweYouTube
Yenza kusebenze ngoku
Ukufumana ababhalisi abali-5 kwiiyure ezili-12
Ubhalise kwaye uthanda iiVidiyo ezingama-6
Wena ngokwakho Qhubeka nesiCwangciso
Sebenzisa i-1x qho kwiiyure ze-12
Inani lababhalisi kufuneka libe esidlangalaleni
Kufuneka ube neeVidiyo ezili-1 + ezithunyelweyo
Yeka ukusebenzisa nanini na!
Ukufumana ababhalisi abangama-10 ukuya ku-15 ​​yonke imihla!
Ubhalise kwaye uthanda iiVidiyo ezingama-0
Isicwangciso si-100% ngokuzenzekelayo
Iyenza yonke imihla ukuba iyenze
Rhoxisa nangaliphi na ixesha!
Ukufumana ababhalisi abangama-20 ukuya ku-30 ​​yonke imihla!
Ukufumana ababhalisi abangama-40 ukuya ku-60 ​​yonke imihla!
Iimpazamo Ukuthintela Xa Ufuna Ababhalisi abaKhululekileyo beYouTube
Ngaba uyi-YouTuber efuna ukukhulisa ijelo labo ngokukhawuleza? Ngamakhulu amajelo e-YouTube aqalwa yonke imihla, ukuma ngaphandle kwi-YouTube ngoku kunzima kunakuqala. Ungasebenza okona kunzima kumxholo wakho, kwaye ufumanise ukuba izimvo zakho ziyala ukuwela amanani amane. Kwiqonga apho abantu bafumana izigidi zeembono kunye namabali empumelelo ajikeleze yonke ikona, uba njani yenye yezo mpumelelo?
Ukuba neqela elizinikeleyo lababhalisi beYouTube kunokuba yiyo kanye le nto uyifunayo ukuba uziva udimazekile kukukhula kancinci kwesitishi sakho. Ngaphandle kwababhalisi basimahla, kunye nomxholo olungileyo, usenethemba lokuba ijelo lakho lingakhula ngokuhamba kwexesha. Ihlala isenzeka, kodwa ayenzeki kubantu abaninzi. Kulapho ababhalisi basimahla kunye nokuthandwa simahla banokunika ishaneli lakho ukuboniswa elifunayo.
Kutheni ufuna ababhalisi beYouTube simahla?
Indlela entle yokunika ishaneli yakho yeYouTube isityhala kwangethuba ngoncedo lwababhalisi beYouTube. Ekugqibeleni, inani lababhalisele ijelo lakho linalo, linelizwi elihle ekuphumeleleni kwakho kwiqonga. Inokukhuthaza ababhalisile bokwenyani be-YouTube ukuba babhalisele nejelo lakho. Xa ugqibile, ababhalisile bakho ku-YouTube banokukuvumela ukuba ulinganise ijelo lakho le-YouTube ngokukhawuleza kunokuba ubulindele.
Xa umntu onokubhalisela u-YouTube esiza ngevidiyo, baya kuyeka ukujonga ukuthanda kunye neembono zevidiyo yakho. Bajonge nenani lababhalisi besitishi sakho. Ukuba ijelo lakho lijongeka ngathi linabaninzi ababhalisile, ke oku kunokunika ukubonakala ngathi ungumntu omlandelayo nolindwayo ngabantu abaninzi. Eli lithuba, limema ababhalisile bokwenyani beYouTube ukuba bathande iividiyo zakho kwaye babhalise kumxholo wakho.
Isitshixo ekusebenziseni ngempumelelo ababhalisile beYouTube ukukala ishaneli yakho yeYouTube kukukhulisa ngokungaguqukiyo ijelo lakho kwixesha elimiselweyo. Ukuba abantu bafumanisa ukuba ngequbuliso uzuze abalandeli abayi-100,000 ngobusuku obubodwa, emva koko oko kunokukrokra. Xa oku kusenzeka, unokulindela ukuba abanye abantu baphathe umxholo wakho ukuze baqonde ukuba kutheni ufumene ababhalisi abaninzi ngokukhawuleza. Ukuba awunazo iziqwenga zentsholongwane ezinokuchaza oko kukhula, banokuqonda ukuba ababhalisile abayinyani.
Endaweni yoko, ungasasaza ababhalisile bakho be-YouTube simahla ukufikelela kwelo nani linye, ngaphandle kokuvuselela urhano. I-SoNuker liqonga elikuvumela ukuba wenze kanye loo nto. Ngokukhula okuzinzileyo kwabalandeli abalishumi ukuya kumashumi amabini ngosuku, unokulindela ukubona ukunyuka okungaguqukiyo kubabhalisi bakho beYouTube. Isantya soku siyenzeka, nangona sisasazekile ixesha elininzi, sisaqhubeka ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nokukala ijelo lakho ngokwemvelo.
Isizathu soku kukuba abantu sele benesiqulatho somgangatho esaneleyo esivela kwiziteshi ezithandwayo ze-YouTube ukonwabela. Ke ukuba ufuna ukutsalela ingqalelo yabo kuwe, indlela efanelekileyo yokufezekisa oku kukukhohlisa osele unalo ulwazelelo olufunayo. Ngokusisiseko, yinyani kude kube uyenza amandla, ngaphandle kokuba iyasebenza ukuzisa ababhalisi abatsha be-YouTube, ukujonga kunye nokuthanda kwisitishi sakho.
Ngelixa ukufumana uninzi lwababhalisi be-YouTube ngokukhawuleza kakhulu kuyimpazamo ephambili abantu abaninzi abathanda ukuyenza, ayisiyiyo kuphela. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga neempazamo ekufuneka uziphephe xa ufumana ababhalisile kwi-YouTube, kwaye ngoba.
1. Akukho Ndibano ivela kubaBhalisi
Ijelo elinababhalisi abasisigidi kodwa akukho zimvo okanye ukuthanda kwiividiyo ezininzi, kwaye mhlawumbi amakhulu ambalwa okujonga kwiividiyo ezininzi kujongeka kuyintlanzi, akunjalo? Xa ufumana ababhalisile beYouTube, kuya kufuneka ugcine umyinge phakathi kwababhalisi, ukuthanda, izimvo kunye neembono.
Ngelixa amagqabantshintshi kunye nezinto abazithandayo zinokwahluka phakathi kweevidiyo, kufuneka zibonise imeko. Oku kuhlala kuza ngohlobo lokubona umndilili wenani lamagqabaza kwividiyo nganye. Inani lokujonga kwakho lihlala liphezulu kunenani lezinto ozithandayo kunye nezimvo ezifunyanwa ziividiyo zakho. Inani lokuthandwa kweevidiyo zakho liya kuhlala liphezulu kunenani lezimvo. Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka uthande izinto ongazithandiyo kwividiyo yakho. Uninzi lwezinto ongazithandiyo zinokubonakalisa kakubi kwaye zithintele ababukeli beYouTube ekubeni babhalisele isitishi sakho.
NgeSoNuker, awungekhe ufumane ababhalisi beYouTube kuphela, kodwa kunye nokuthandwa kweYouTube. Oku kukunceda ugcine ulungelelwaniso phakathi kweembono kunye nezinto ozithandayo ozifunayo, ukunika imbonakalo yesiteshi esiphumeleleyo nesikhawulezayo.
2. Linganisa izinto ozilindeleyo
Enye into ekufuneka uyiqwalasele uyithathela ingqalelo kukuqonda into oyilindeleyo kubabhalisi bakho beYouTube. Ukuba ulindele ukuba baziphathe njengababhalisi bokwenyani, unokuphoxeka. Ababhalisi be-YouTube basimahla banokuza ngeendlela ezimbini.
Eyokuqala kwezi zi-bots. Ezi ziindlela ze-YouTube ezenzelwe injongo ethile yokwakha inani lababhalisi kumajelo awahlukeneyo e-YouTube. Batyekele ekubeni bangabinayo imifanekiso yeprofayile, okanye umfanekiso wesitokhwe ocacileyo. Uninzi luhlala lushiya ngasemva izimvo zogaxekile kwividiyo zakho. Oku kunokuba yingozi, kuba kungathintela ngokukhawuleza abantu abaninzi ekubeni babhalisele ijelo lakho. I-YouTube ikwanomgaqo-nkqubo ongqongqo ngokuchasene neeakhawunti ezinjalo. Ke nokuba ufuna ababhalisile kwiYouTube, kunqande amaqonga ababonelela ngeebhot.
Olunye ukhetho kukunxibelelana ngokuthe ngqo nabanye abadali bemixholo ye-YouTube abajonge ukukala nokukhulisa ijelo labo ngendlela efanayo naleyo uyiyo. Ababhalisi be-YouTube obafumanayo banokuzibandakanya kakhulu nejelo lakho, kodwa ziiakhawunti eziyinyani. Uninzi luya kukushiya ukuthanda kukaYouTube ukuba wenza okufanayo nakubo.
Ixesha elingaphezulu, ukongezwa kwaba babhalisi beYouTube kunokwenza ukuba itshaneli yakho ifumane ukuboniswa okufunayo. Oku kunje ngokuba ialgorithm yeYouTube iya kuqala ukuqonda ukuba iiakhawunti ezahlukeneyo ziyarhuma kwisitishi sakho kwaye zithanda iividiyo zakho.
Ukuba ukhathazekile malunga nokuba nenani eliphantsi lamagqabantshintshi kwiividiyo zakho, cinga ke ngokucela uncedo kubabhalisi bakho beYouTube. Kwiqonga elifana ne-SoNuker, ungasebenzisana nabanye abadali bemixholo ye-YouTube ukonyusa ukukhula kwesiteshi sakho se-YouTube. Xa kuziwa kutshintshiselwano olunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba kulindeleke ukuba uncede nabanye abadali bokuqukethwe.
3. Yintoni Ababhalisi beYouTube abanokuyenza kuwe
Ngaphandle kokuba ufuna ukwakha itshaneli yakho ngokuthembela kubabhalisi be-YouTube, amathuba okuba uya kufuna ababhalisi bokwenyani be-YouTube kwisitishi sakho. Umbono wokusebenzisa ababhalisile beYouTube kufuneka usebenzise amanani ukukhulisa ukukhula kwesiteshi sakho. Eli lithuba lokutsala ababhalisile bokwenyani beYouTube abaya kuthi beze, bazibandakanye nomxholo wakho.
Konke okwenzayo xa ufumana ababhalisile kwiYouTube, kukuzama ukwandisa ukubonakaliswa komxholo wakho eqongeni. Ialgorithm yeYouTube ayinakulindeleka ukuba ikhuthaze umxholo wakho ngaphandle kokuba ifumene uluntu olunomdla kumxholo wakho. Kwaye ekubeni kukho abenzi bemxholo abathandwayo phantse kuyo yonke i-niche kwi-YouTube, oku kubeka abadali bemixholo emitsha engxakini.
Ukuba ungumntu obenejelo le-YouTube okwethutyana kodwa wafumana impumelelo encinci ekungeniseni izimvo kunye nezinto azithandayo. Emva koko unokuxhamla ngokufumana ababhalisile kwiYouTube. Ukuba ufumanisa ukuba awufumani ababukeli ngakumbi, amathuba okuba ividiyo yakho ayikhuthazwa nakubani na kwaye ayifumani ngokwaneleyo. Ababhalisi abambalwa beYouTube yonke imihla ngaphezulu kwexesha elimiselweyo banokufumana ialgorithm yokucinga ukuba umxholo wakho uyavezwa, kwaye ngenxa yoko kufuneka ukhuthazwe.
4. Yakha Ukutsala Kwakho
Ukuphumelela kwi-YouTube ekugqibeleni kuyehla kumgangatho womxholo wakho. Unokuba nezigidi zababhalisi be-YouTube, kodwa ngaphandle komxholo ophezulu, awuyi kufumana i-traction oyifunayo kubabukeli bokwenene. Kwaye ekubeni ababukeli bokwenene kunye nokukhula okuzinzileyo yinto enokukunceda ukuba ufikelele kwinqanaba leqonga, yindlela elungileyo yokufumana isantya kwisitishi sakho.
Nje ukuba uphuhlise inani elithile lokuvezwa kunye nokutsalwa kwisitishi. Yenza imali ngomxholo wakho kwaye udibane neYouTube. Ukuqala komfutho wokuqala yinto enokwahlula ijelo lakho le-YouTube kukusilela nakwimpumelelo. Kwaye kulapho ababhalisi be-YouTube basimahla banokukunceda khona.
Kwangelo xesha, akufuneki uxhomekeke kakhulu kubabhalisi beYouTube, kodwa endaweni yoko sebenzisa uncedo lwabo ukukhuthaza impumelelo yakho.
5. Musa ukulibala malunga nesiqulatho
Umxholo owenzayo uyinto eya kukunceda ukuba wakhe ijelo elihlala ixesha elide kwiYouTube. Ukujolisa kumxholo wakho, kwaye usebenzisa ababhalisi beYouTube ecaleni ukukhulisa ukubonakala komxholo kunokukucwangcisela impumelelo. Kuya kufuneka usoloko ujonge loo mda, emva kweyona mbono yokwenyani, ababhalisile kunye nezinto abazithandayo ezilandelayo.
Nangona kunjalo, uninzi lwabenzi bemxholo bahlala belibala ukwenza umxholo olungileyo. Endaweni yoko, baxhomekeke kumanani ababhalisi beYouTube kunye neYouTube bayathanda ukubanika ukubonakala kwempumelelo. Xa oku kusenzeka, kunokubonakala kubabukeli bokwenyani ngabasebenzisi beqonga lokuba ukubonakala kwakho kuvela kubabhalisi simahla kunye nezinto abazithandayo. Ukuba oku kuyenzeka, uninzi lwababhalisi abanokubakho bakulumkele ukuzibandakanya nomxholo wakho.
Ukuba unayo imixholo ekumgangatho ophezulu nangona kunjalo, unokufumana ngempumelelo amanani owafumanayo ngababhalisi bakho beYouTube kunye nezinto abazithandayo, ekukhuleni kwesitishi sakho.
6. Ukungasebenzisi ezinye iindlela zokukhulisa ijelo lakho
Ngelixa ababhalisi beYouTube kunye nokuthandwa nguYouTube kunokukunceda ukhulise ijelo lakho, ayisiyiyo kuphela indlela onokukhetha kuyo. Ngaphandle kokuba yenye yeendlela ezilungileyo zokukhulisa ijelo lakho leYouTube, uya kufumana impumelelo xa uyisebenzisa kunye nezinye iindlela.
Ke ukuba sele ufumene ababhalisile beYouTube, unokusebenzisa izicwangciso ezinje ngokunikezelwa, ukhuphiswano kunye neekhuphoni zokufumana ababhalisile bokwenyani kwisitishi sakho. Kunye nokutsala umdla wabo banokubhalisela ijelo lakho, ufuna ukugcina ingqalelo yabo. Oku kwandisa amathuba okuba babhalise kwisitishi sakho.
Sebenzisa izipho, ukubulela abantu ngokunceda ijelo lakho likhule, kunye nokufumana ezinye iindlela zokuzibandakanya nababukeli bakho kunokubangela ukukhula ngokukhawuleza kwesitishi sakho.
Kufuneka uhlale ixesha elingakanani ukufumana ababhalisi beYouTube mahala ukuze ukhulise iTshaneli yakho?
Xa uqala ukufumana ababhalisi bakho beYouTube kwisitishi sakho, unokuziva unemincili yokuba umfutho ekugqibeleni uza kuhamba kwisitishi sakho. Ke masithi inyanga iyahamba kwaye ijelo lakho likhula ngcono kunokuba ubulindele. Ngaba eli lixesha elifanelekileyo lokuyeka ukufumana uncedo kubabhalisi beYouTube.
Impendulo echanekileyo yeyokuba kuya kufuneka uhlale uthembele kubabhalisi beYouTube kwaye ukuthanda iYouTube kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo.
Ngaba umxholo wakho ukwi-niche eyaziwayo, kwaye ngaba unokutsala iimbono ezaneleyo ngokwawo ngoku?
Ukuba umxholo wakho ukwi-niche eyaziwayo, ngaba uqinisekile ukuba ungatsala izihlwele kubadali bemxholo abadumileyo kwi-niche yakho?
Ukuba umxholo wakho ukwindawo engacacanga ngakumbi, ungakanani ke umxholo owufumanayo kubabukeli bokwenyani?
Ngaba uziva uzithemba ngokwaneleyo ukuba unokuqhubeka nokukhulisa ijelo lakho le-YouTube ngaphandle koncedo lwababhalisi beYouTube.
Iziganeko zomntu ngamnye zinelizwi lokuba kufuneka uhlale uthembele kubabhalisi beYouTube ixesha elingakanani. Nangona kunjalo, nokuba umxholo wakho usafuna ukonyuselwa ukuze ufumane ukubambeka yinto eqinisekileyo nayo.
Oku kuthetha ukuba unokuxhomekeka kwaye ukhethe ukuyeka ukuthembela kubabhalisi be-YouTube nanini na ufuna. Unokucela ababhalisi beYouTube kamva, ukuba uyayifuna.
Nge-SoNuker, unokuxhomekeka ngokulula kubabhalisi be-YouTube basimahla. Bona amanani akho enyuka kangangenyanga, kwaye ukuba ucinga ukuba ungaqhubeka nokukhulisa ijelo lakho ngokwakho, ke kulungile! Ngamanye amaxesha, abantu basebenzisa ababhalisi beYouTube kunye nokuthandwa kweYouTube ngeenjongo ezithile zokukhuthaza enye, okanye iividiyo ezimbalwa.
Ufuna ukuvezwa njani kwaye ungabasebenzisa njani ababhalisi beYouTube ukukhulisa ijelo lakho kuxhomekeke kuwe. Nangona kunjalo, ukuba uhlala uzifumana ufuna uncedo lwababhalisi be-YouTube kunye nokuthandwa ngu-YouTube, unokuhlala uthembele kwi-SoNuker ukukunceda.
Kutheni le nto abantu bekhetha ababhalisi basimahla beYouTube?
Indlela eya empumelelweni inokuba nzima, kwaye kwiYouTube, ubunzima bonyusa ukhuphiswano. Abantu bahlala bexhomekeke kubabhalisi be-YouTube njengendlela yokulinganisa indawo yokudlala, ngakumbi ukuba ngabadali bemixholo emitsha.
Oku kunjengokuqwalaselwa eqongeni njengeYouTube kunokuba nzima kakhulu. Nangona kunjalo, nje ukuba uqaphele kwaye ialgorithm yeYouTube iqale ukucebisa nokukhuthaza iividiyo zakho, impumelelo inokulandela ngokwendalo. Kwaye nge-SoNuker, unokufumana abalandeli bokwenyani onokuthi ubancede nabo.
Ngokukhetha ukungakhethi ababhalisi beYouTube simahla, unokulawula impumelelo yakho ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Cinga ngokwakha izinto ezilindelweyo malunga nendlela ababhalisi beYouTube abanokukunceda ngayo ukukhulisa ijelo lakho. Ngale ndlela, unokuzifumana ukhula kwaye ukhule ngokukhawuleza kunokuba ubulindele.
Abalandeli abafanelekileyo be-YouTube kunye nokuthandwa okungafaniyo kweYouTube kunokukunceda usete ijelo lakho libe yimpumelelo. Endaweni yokulinda ialgorithm yeYouTube ukuba uqaphele umxholo wakho, kutheni ungamemi eso siveliso kuwe.
Sebenzisa ababhalisi beYouTube ngokuthe chu, njengokufumana abalishumi ukuya kumashumi amabini ababhalisile ngosuku kunokunceda ishaneli yakho ikhule. Oku kunika umbono wokukhula kokwenyani, kwaye kunokukhuthaza ababukeli bokwenyani ukuba babhalisele ijelo lakho.
Kwangelo xesha, awungekhe ulibale malunga nokuthandwa kwiividiyo zakho. Ukuthandwa kunye nezimvo zibonisa ukuzibandakanya kwesitishi sakho, kwaye zizalathiso eziphambili zokukhula. Ukuba iividiyo zakho azikakwazi ukufumana izinto ozifunayo, ukuthanda kweYouTube kunokuyisombulula ingxaki kuwe.
Xa usebenzisa iqonga leSoNuker ukufumana ababhalisile kwiYouTube, awunakukhathazeka malunga ne-bots okanye izimvo zogaxekile ezivela rhoqo kwiividiyo zakho. Endaweni yoko, unokuxhomekeka kubabhalisi bakho beYouTube ukukunika ukuthanda kweYouTube ngokunjalo. KwiYouTube, ukuthanda kunye neembono zibaluleke kakhulu. Ukuba nezinto ozithandayo ngaphezu kokungazithandiyo kunye nokuhamba okuzinzileyo kwababhalisi abatsha yiyo yonke into oyifunayo ukukhulisa ijelo lakho kwiYouTube.
Unokuxhomekeka kwi-SoNuker ukukunceda ufunde ukusebenzisa inkonzo yethu ukuphucula impilo yakho. Hlela isantya sokukhula kwejelo lakho kwaye ube yiTuber eyaziwayo ngoncedo lwababhalisi basimahla. Unokuyeka ukusebenzisa iinkonzo zethu nangaliphi na ixesha uziva ungasazifuni, okanye uzisebenzise ukukhuthaza iividiyo ezithile okanye iziqwenga zomxholo.
Ngelixa zininzi iimpazamo onokuthi uzenze xa ufumana ababhalisi beYouTube, ukusebenzisa isilumkiso esisempilweni kunokukunceda ubaphephe. Ukusuka ekukhetheni iqonga elilungileyo, njengeSoNuker, ukukubonelela ngababhalisi beYouTube, ukwazi ukuba ungawasebenzisa njani amanani ukuphembelela impumelelo yakho. Qalisa ukwakha indlela eya kumaphupha akho e-YouTube ngeSoNuker namhlanje.
Iibhulogi ezitsha zeBlogs
3RHU uJanuwari 2022
IsiKhokelo esifutshane seNtengiso kaYouTube
Indawo yemithombo yeendaba zentlalo inabadlali abaninzi-i-Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, kunye neReddit ukukhankanya abambalwa. Okuphikisanayo,...
24I Disemba 2021
Ulenza njani uninzi lwe-VR ye-YouTube ukuze ufumane abalandeli abaninzi
I-VR, okanye i-Virtual Reality, yinto entsha yezobuchwepheshe enika ababukeli imbono yomntu wokuqala wesenzo. Ubunyani benyani ayithintelwanga kwisiphelo esiphezulu...
I-2nd December Disemba 2021
Iingcebiso zokufumana ababhalisile bakaYouTube abaninzi ukuba babonelele "Enkosi kakhulu"
Nge-21 kaJulayi 2021, uYouTube uphume nenqaku elitsha elinike abadali bomxholo enye indlela yokwenza imali kuYouTube. I...
Sebenzisa ifom yoku-odola ngokukhawuleza apha ngezantsi
Izinketho zokuthenga ixesha elinye ngaphandle kokurhuma okanye ukuhlawula kwakhona.
Ukuhanjiswa kwesantya: Ababhalisi abayi-10-100 ngosuku
inkonzo I-10 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 20) I-20 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 35) I-30 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 50) I-50 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 80) I-100 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 140)
Joyina amalungu e-500,000 + sele esebenzisa i-SoNuker ukufumana ababhalisi be-YouTube simahla kunye nokuthandwa kwevidiyo namhlanje!
Fumana ukuthandwa simahla kwi-YouTube
I-SoNuker ibonelela ngoluhlu olubanzi lweenkonzo zentengiso yemidiya yoluntu kunye nenethiwekhi yokuthengisa yokufumana ababhalisi be-YouTube simahla kunye nokuthandwa simahla kweYouTube.
I-USA kunye ne-CAN: i-USA kunye ne-CAN: 888-881-9070
Ubakhuthaza njani ababhalisile bakho bakaYouTube ukuba bahlale kwiividiyo ezinde
Iingcebiso ezishushu zokwenza iividiyo ezikhuthaza iiJongo ezingakumbi zikaYouTube kunye noGcina